I-Tanzania izakubamba iMiboniso eNkulu yezoKhenketho ye-Afrika ese-Mpuma ngo-Okthobha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » I-Tanzania izakubamba iMiboniso eNkulu yezoKhenketho ye-Afrika ese-Mpuma ngo-Okthobha
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Abaphathiswa bonke bavumile ukuseka umboniso wonyaka we-EAC yeNgingqi yezoKhenketho (EARTE) ngenjongo yokuphucula ukubonakala kwalo mmandla kunye nokuwuthengisa njengendawo enye yabakhenkethi.
Amazwe aseMpuma Afrika aza kubamba umboniso omkhulu wezokhenketho ngo-Okthobha walo nyaka.
Umboniso wokuqala kunye nomnyhadala wokhenketho wengingqi umiselwe ukuba ubanjelwe eTanzania.
Umboniso omkhulu wezokhenketho wengingqi ubekelwe ukutsala abathathi-nxaxheba abavela kumazwe angamalungu eTanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Burundi kunye neSouth Sudan.
Ukhenketho lokuthengisa njengemveliso yezoqoqosho yengingqi, amazwe aseMpuma Afrika aza kubamba umboniso omkhulu wezokhenketho ngo-Okthobha walo nyaka phantsi komoya wokudibana kwengingqi kunye nephulo lokuthengisa ukhenketho lommandla.
Umboniso wokuqala kunye nomkhulu wokhenketho lwengingqi kulindeleke ukuba ubanjelwe eTanzania, ukutsala amazwe amathandathu angamalungu oMbutho we-Afrika eseMpuma (i-EAC) ukubonisa iindawo zabo zokhenketho phantsi kwesambulela sokudibana kwengingqi kwezokhenketho.
Iingxelo ezivela kwi- Uluntu lwaseMpuma Afrika I-ofisi eyintloko kumantla eTanzania esixeko sabakhenkethi i-Arusha yathi umboniso wokuqala kunye nomkhulu wokhenketho wengingqi ucwangciselwe u-Okthobha ukutsala abathathi-nxaxheba abavela kumazwe angamalungu eTanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Burundi kunye neSouth Sudan.
Umphathiswa Wezemvelo kunye noKhenketho eTanzania uGqirha Damas Ndumbaro ubhengeze umboniso wezokhenketho wengingqi ngexesha lentlanganiso kunye neBhunga labaPhathiswa bezoKhenketho eMpuma Afrika (EAC).